Madaxweyne Xasan Sheekh oo la sheegay in istaagga uu ka dhacay | Baydhabo Online
Madaxweyne Xasan Sheekh oo la sheegay in istaagga uu ka dhacay
Madaxweynaha Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa waxaa la soo sheegaya in xalay uu joogga ka dhacay, xilli uu ku sii jeeday Hotel City Palace, oo uu kulan kula lahaa Xildhibaanada Labada Aqal.
Madaxweynaha oo ka amba baxaayay Villa Somalia, ayaa la sheegay in istaagga uu ka dhacay, mar uu doonaayay in uu fuulo gaarigiisa, nooca aysan rasaastu karin.
Madaxweynaha oo ay la socdeen xubnaha ku dhow dhow, ayaa garbaha qabtay, saarayna gaarigiisii. Ma kala cadda in Madaxweynuhu uu xanuunsan yahay iyo in kale. Balse waxay tani ku soo aadaysaa maalin ka dib, weerar afka ah oo uu kala kulmay Madaxweynihii hore ee Somaliya, Shariif Sheekh Axmed.
Shariif Sheekh Axmed oo siyaasi cod kar ah, ayaa mid mid isu dul taagay waxyaabaha ay ku fashilmatay Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoona uu muujiyay in dowladiisu ay maanta taagan tahay meel ka hooseysa 2012.
Madaxweynaha iyo saaxiibadii, ayaa habeenkii Axada kulan deg deg ah ka yeeshay weerarka kaga yimid Shariif Sheekh Axmed. Madaxweynuhu wuxuu qorsheynaayay in shir jaraa’id uu ugu jawaabo Shariifka, balse waxaa la leeyahay xertiisa, ayaa kula talisay inaanan loo baahnayn shir jaraa’id, oo uu Saxaafadda isugu yeero.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa qaar ka mid ah Xildhibaanada Aqalada Hoose iyo Sareba kula kulmay Hotel City Palace, oo ku yaala Degmada C/casiis ee Waqooyiga Magaalada Muqdisho. Kulankan waxaa sidoo kale soo muuqday Odayaal Dhaqameedyo, Saraakiil ciidan iyo dhalinyaro wiilal & hablaba leh.
Madaxweyne Xasan Sheekh, ayaa wuxuu markale uu ku celiyay in uu yahay murashax u taagan Xafiiska Madaxtooyada, iyadoo uu Xildhibaanadu weydiistay in ay codkoodu siiyan.
Madaxweynaha, ayaa waxaa ka muuqday daal, iyadoo aanu xalay u fir fircoonayn, sidii horeyba looga bartay, kolka uu ka qaybgelayo kulamada ceynkani oo kala ah.
Dhanka kale Xildhibaanada Labada Aqal, ayaa waxaa la xaqiijiyay in qaarkood ay ka horyimaadeen inay ka qaybgelaan kulankaasi, sababo ku aadan, iyadoo ka qaybgelayaasha loo qaybiyay koofiyado cagaar/akhtar ahaa, laguna taageeraayay murashaxnimada Madaxweyne Xasan.